‘यहाँ कुनै दीपा, पूजा, बर्षालाई गल्ती गर्ने छुट छैन है, भन्देको छु नी !’ : केकीको आक्रोश (भिडियो सहित) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/‘यहाँ कुनै दीपा, पूजा, बर्षालाई गल्ती गर्ने छुट छैन है, भन्देको छु नी !’ : केकीको आक्रोश (भिडियो सहित)
‘यहाँ कुनै दीपा, पूजा, बर्षालाई गल्ती गर्ने छुट छैन है, भन्देको छु नी !’ : केकीको आक्रोश (भिडियो सहित)
महानायक को ? उक्त बिषय केहि हप्ता यता कलाकारहरुको पोस्ट र भनाईले सर्वत्र चर्चा र आलोचना पाएको देखिन्छ । यही बिषयमा नायिका केकी अधिकारीले आफ्नी आमाको प्रसंग जोडेर आफ्नो समाजिक संजाल फेसबुक पेज मार्फत गरेको पोस्ट यस्तो छ :
बिगत केही हप्ता यता आमा त्यसै त्यसै त्रसित हुनुहुन्छ। फेसबुकमा खासै सक्रिय हुनुहुन्न आमा तर आजकल हर दिन हर घन्टा आमाको आँखा अनि ध्यान फेसबुक मै हुन्छ। नसा लाग्यो कि क्या हो आमा भनेर सोधेको, होइन तिमीले केही लेखेको छौ कि भनेर हेरिराको भन्नुभो।
अहिले चर्किरहेका विषयमा केही भन्ने वा लेख्ने नगर है भन्नुभो। सहनै गाह्रो हुने प्रतिक्रियाहरु आउछन् अनि मेरो मन भतभत पोल्छ भन्नुभो। म एकछिन घोत्लिए अनि सोचेँ, गल्ती त हाम्रै हो नि दीपा दी,पहिलो गल्ती त तपाईं छोरी भएर जन्मिनु भो। ल त्यस्मा हाम्रो केही चल्दैन, अनि फेरि तपाईं सफल चाहिँ किन हुनुभो?
हेर्नुहोस पुरा भिडियोमा :
साम्राज्ञीलाई बैज्ज;त हुने डर किन ? यो भिडियो सार्बजनिक गर्दै यु,ट्युब तथा मिडियामा अन्तर्वार्ता नदिने घो,षणा (भिडि,यो सहित)
सुस्मिताको अहिलेसम्मकै दु*र्लभ भिडियो बाहिरियो (हेर्नुहोस भिडियो)
युरोपकी युवती र नेपाली केटाको प्रेम काठमांडु मा देखेपछि हात माग्न पुगे नेदरल्याण्ड घरमा (भिडियो हेर्नुहोस)